समाजवादको जलपमा वैकल्पिक शक्ति ! - Chautari Post Online
June 9, 2019 by Chautari Post Online
आज बाबुराम भट्टराईले जसरी वैकल्पिक शक्तिको कुरा उठाइरहेका छन् । आम जनताले उनको यो कुरालाई पटक्कै विश्वास गर्ने वाला छैनन्। उनले यो भन्दा जोडदार कुरा २०५२ साल फागुन १ गतेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले शुरु गरेको शसस्त्र युद्ध थियो । यीनै भट्टराईले मस्यौदा गरेका ४० बँुदे मागपत्र तत्कालीन सरकारले पुरा नगरेपछि नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभिभारा बोकेर नयाँ शक्तिको रुपमा सुरु भएको हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । त्यतिवेला सशस्त्र युद्धले निर्माण गरेको शक्ति नै यर्थातमा नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति अर्थात नयाँ शक्ति थियो ।
डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले यो पार्टीलाई समाजवादको जलप लगाएर पार्टीलाई वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उभ्याउने दाउमा छन् । जहाँसम्म समाजवादको प्रश्न छ राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीले भनेजस्तो नेपाली राजनीतिमा यो फेसनदार टोपीजस्तै हो, जो सबैले पहिरिन रुचाउँछन् । अब त राप्रपासमेतले समाजवाद भन्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेसले त बीपीको समाजवादको क्रेडिट खाइरहेको छ।
डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले यो पार्टीलाई समाजवादको जलप लगाएर पार्टीलाई वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उभ्याउने दाउमा छन् । जहाँसम्म समाजवादको प्रश्न छ राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीले भनेजस्तो नेपाली राजनीतिमा यो फेसनदार टोपीजस्तै हो, जो सबैले पहिरिन रुचाउँछन् । अब त राप्रपासमेतले समाजवाद भन्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेसले त बीपीको समाजवादको क्रेडिट खाइरहेको छ। उसको अर्थनीति दलाल पुँजीवाद भए पनि । हुन त प्रचण्ड, बाबुराम सबैले दलाल पुँजीवादको नीति अंगाल्दै आएका छन् । त्यसैले माक्सवादी विगत भएका डा. भट्टराई र उपेन्द्र यादवले समाजवादी टोपी पहिरिनु आश्चर्यजनक छैन । तीनै बाबुरामले समाजवादको प्रशिक्षण दिने क्रममा भन्ने गर्थे– समाजवाद सर्वहारा अधिनायकत्व मातहत श्रमजीवी वर्गको राज्य तथा सर्वत्तोमुखी समाजवादी आर्थिक कार्यक्रम (योग्यता अनुसार काम र काम अनुसार दाम) भएको एउटा माक्र्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रीय अवधारणा र संक्रमणकालीन राजनीतिक व्यवस्था हो । जो साम्यवाद (सामान्य अर्थमा योग्यता अनुसारको काम, आवश्यकता अनुसार दाम) तिर लक्षित हुन्छ । के बाबुराम र उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी त्यता तिर लक्षित छ ? छैन भने किन समाजवाद जलप लगाउन प¥र्यो पार्टीलाई ? यसतर्पm आम नेपाली सचेत रहनु पर्छ ।
अन्त्यमा, यो वैकल्पीक शक्ति सरकारको, विभिन्न दल तथा देशी विदेशी शक्तिको चौतर्फी घेराबन्दीमा छ । जनताको ठूलो सहयोग पाइरहेको यो पार्टीले अन्य संसद भन्दा बाहिर रहेका कम्युनिष्ट पार्टीलाई समेत समावेश गरी एउटा बृहत कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन सके यो पार्टीले आशातित सफलता प्राप्त गर्नेछ । यो नै नेपालको वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाउने छ, न कि डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी नेपाल ।नेपाल समाचारपत्रबाट
Prevबालविवाह हुने शीर्ष १० मुुलुकमा नेपाल
Nextहो, महिला–मैत्री पुरुष नै सही मर्द हो